जिल्लाका ६५ प्रतिशत घरधुरीमा हालसम्म विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सल्यान वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लामा १० हजार ५२५ विद्युत् ग्राहक छन् । अहिलेसम्म जिल्लाका ३५ देखि ४० प्रतिशत घरधुरी मात्र विद्युत्को पहुँचमा रहेको केन्द्रका प्रमुख अर्जुन पोख्रेलले बताए । जिल्लामा करीब ३० हजार घरधुरी रहेको अनुमान छ ।
बिजुली बत्ती नहुँदा अधिकांश जिल्लावासीको दिनचर्या कष्टकर भएको छ । टुकी बत्ती र सौर्य ऊर्जाले दिनचर्या गुजार्न उनीहरू बाध्य छन् । विद्युत् अभावले उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
जिल्लाका सबै ठाउँमा अबको ३ वर्षभित्र विद्युतीकरण हुने केन्द्र प्रमुख पोख्रेलले बताए । ‘गत आवको रू. १४ करोड ८० लाख बजेटले केही ठाउँमा विद्युत् विस्तार हुँदै छ,’ उनले भने । यो काम सम्पन्न भएमा थप करीब ५ हजार घरधुरीमा बिलुली बत्ती पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अब रू. ७० करोड बजेट प्राप्त भएमा सल्यानका सबै बस्तीमा विद्युत् पुग्ने बताए । गत आव र चालू आवको गरी केन्द्रको १८ करोड, प्रदेशको ७ करोड र स्थानीय तहहरूको ७ करोड रुपैयाँ बजेटबाट अहिले विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
विगतका वर्षमा जिल्लामा पूर्वाधार विकासका लागि अत्यन्त कम बजेट आउने गरेकाले विद्युत् विस्तार सुस्त देखिएको मन्त्री ज्वालो बताए । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अहिलेको बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएकाले अबको २–३ वर्षमा जिल्लाभर विद्युत् सुविधा पुग्ने दाबी उनले गरे ।
यसबीच, सल्यानमा विद्युत् महशुल नतिर्ने ३० ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि महशुल नतिर्ने ग्राहकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सल्यान वितरण केन्द्रको कालोसूचीमा परेका हुन् । कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट २ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको कार्यालयले बताएको छ । कालोसूचीमा पर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी औद्योगिक ग्राहक रहेको प्राधिकरणका केन्द्र, सल्यानका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।